लगातार सर्किट लागिरहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको कस्तो आयो वित्तीय विवरण ? - Arthasansar
लगातार सर्किट लागिरहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको कस्तो आयो वित्तीय विवरण ?
बुधबार, २८ बैशाख २०७९, १२ : ३८ मा प्रकाशित
दाेश्राे बजारमा काराेबार सुरू भएदेखि नै लगातार जसाे सकारात्मक सर्किट लागिरहेकाे जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेश्राे त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेश्राे त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले ८ करोड ६४ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो नाफा रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७.२५ प्रतिशतले धेरै हाे । गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले ६ करोड २९ लाख ७३ हजार रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
समिक्षा अवधिसम्म संस्थाकाे खुद व्याज आम्दानी पनि ५७.४३ प्रतिशतले बढेर २६ करोड ८५ लाख ६८ हजार रूपैयाँ पुगेकाे छ । गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाकाे खुद व्याज आम्दानी १७ करोड ५ लाख ९५ हजार रूपैयाँ रहेकाे थियाे ।
तेश्राे त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा पनि ९१.९४ प्रतिशतले बढेर १० करोड ३३ लाख ९४ हजार रूपैयाँ पुगेकाे छ । गत वर्ष संस्थाले ५ करोड ३८ लाख ६९ हजार रूपैयाँ सञ्चालन मुनाफा गरेको थियो ।
त्यस्तै, संस्थाको चुक्ता पुँजी १६ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा ३८ करोड ६० लाख ६३ हजार रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । संस्थाकाे प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ७२ रूपैयाँ २ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ३४१ रुपैयाँ २८ पैसा रहेकाे छ ।
संस्थाले सार्वजनिक गरेकाे वित्तीय विवरण यस प्रकारकाे छ :